စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: စစ်တပ်ကို စစ်တပ်နဲ့ ပြန်တိုက်ကြ
စစ်တပ်ကို စစ်တပ်နဲ့ ပြန်တိုက်ကြ
စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပင်တိုင် ဆောင်းပါးရှင် ကိုရဲသူနိုင် ရေးသားပေးပို့လာတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဒီကနေ့ စာဖတ်ပရိသတ်များအား တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ အပြုသဘောနဲ့ အခုလို အင်တိုက်အားတိုက် ရေးသားပေးပို့လာသော ဆောင်းပါးရှင်များနဲ့ တကွ ယာယီ ဘာလော့ဂ်တွင် ကြည့်ရူအားပေးကြသူ ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိသတ် ရဲဘော် ရဲဘက် အပေါင်းတို့ကို အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း လေးစားစွာ ပြန်ကြားအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
“ဘက်စုံတက်စုံဖွင့် ညီညီညာညာ တော်လှန်ကြ”
တော်လှန်ရေးတစ်ခုထဲနဲ့ အောင်မြင်ဖို့ S.P.D.C ကို တော်လှန်ဖို့ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ S.P.D.C ဟာ လူကို လူလိုသဘော မထားတဲ့အတွက် လူပေါင်း များစွာကို သတ်ဖို့ ၀န်မလေး ခဲ့ပါဘူး၊ သံဃာ့အရေး အခင်းတွေမှာ ရဟန်းပါမရှောင် ရက်ရက်စက်စက် ရှင်းပစ်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းရဲ့ သက်သေ ခံချက်တွေမှလည်း ဖက်ဆစ်စစ် အာဏာရှင် တွေ အတွင်းသရုပ်အမှန်ကို ကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်။
S.P.D.C အဆင့်ဆင့်မှာ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းထက် ပိုလုပ်ပေးကြမယ့် ဦးနှောက်မဲ့၊ အသိမဲ့၊ အဆင့်နိမ့် သူတွေ ပေါများလာတဲ့ ယနေ့လို အချိန် မျိုးမှာ ပြည်တွင်းမှာ မည်သည့် Political လှုပ်ရှားမှုမျိုးမှ လုပ်ဖို့ဆိုတာ မမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ကို အင်မတန် ခဲယဉ်း နေပါတယ်။
ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ရ၀တ အဆင့်လောက်ကနေတောင် ၅ ည ပုဒ်မတွေ တပ်ပြီး ဖမ်းပိုင်ခွင့် ရှိနေတဲ့ ယနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ စိုးရိမ် ရေမှတ်ထက်ကို ကျော်လွန်နေပါပြီ။ ပျက်စီးနိုင်ငံများ အဆင့်မှာ ၁၃ ကိုရောက်နေသလို အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည် ၂၀ ထဲ မှာလဲရောက်နေပါပြီ။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်မှာတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အောက် မှာ ဆိုမာလီဆိုတဲ့ မင်းမဲ့တိုင်းပြည် တစ်ခုပဲ ရှိပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် S.P.D.C အဆင့် ဆင့်ကတော့ လိမ်လို့ ကောင်းနေတုံးပဲ ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို လိမ်တဲ့ နေရာမှာတော့ အမြင့်ဆုံး အဆင့်ထက်တောင် ကျော်နေပါပြီ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းတွင် ဆိုးဝါးတဲ့ စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ကြီးး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ဆက်ဖြစ်နေ တုံးပါ။
ကမ္ဘာမှာအဆင့် ၂၆ ရောက်နေတဲ့ ရေနံပေါ် ဖင်ခုထိုင်ထားတဲ့ နာမည်ကျော် တိုင်းပြည်တစ်ခုက ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ၂၇ ရောက်အောင် မနည်း လုပ်ယူရမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ အနှစ်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ There is does not matter. Whit cat or black cat, as long as can catch. The rat, it is good cat, ဆိုတဲ့ တရုတ် မျိုးဆက်ရဲ့ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိတ်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကြောင့် လူ ၁၀ သန်းကျော် ထမင်းငတ်ပြီး သေခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ စူပါတန်းဝင် တတိယ စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံး တရုတ်ပြည်ကြီးတောင်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက်ကို ၆ % လောက်ရအောင် မနည်းလုပ်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်းကို (10.4%) တိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တကယ် တော့ အဲဒါဟာ အရာရှိကြီး ကတော်တွေရဲ့  စီးပွါးရေး တိုးတက်မှုနှုန်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်တဲ့သူက သူတို့ နိုင်ငံ ငလျှင်ဒါဏ် ခံရစဉ်မှာ စက္ကန့်တိုင်းဟာ ခလေး တစ်ယောက်ရဲ့အသက် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း ထိထိ ရောက်ရောက် ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အာဏာရှင်ဆိုပေမဲ့လည်း သူ့ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ အုပ်ချုပ်ပုံက တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က စစ်ခေါင်း ဆောင်တွေကိုတော့ ဘာနဲ့နှိုင်းရမလဲတောင် မသိတော့တာ အမှန်ပါ။
တလောကတော့ စာဖတ်ပရိသတ် တစ်ယောက်ပြောတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ စစ်ခွေးလို့ မသုံးပါနဲ့တဲ့၊ ခွေးဘက်က နာပါတယ်တဲ့၊ ခွေးဆိုတာ သခင်အပေါ် အင်မတန် သစ္စာသိ မွန်မြတ်လို့ပါတဲ့၊ အခု စစ်ခေါင်းဆောင် တွေက သခင်ပမာ ပြည်သူလူထုတွေ အပေါ်မှာလည်း သစ္စာမရှိ၊ တပ်မတော် တည်ထောင်ခဲ့သူ အပေါ်မှာလည်း စော်ကား၊ ကမ်းကုန်အောင် ငွေကြေး၊ ရာထူး၊ အာဏာတွေ မက်မောပြီး ခွေးရူးလို ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ ဆိုပြီး လိုက်ကိုက်နေ ပါတယ်တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ခွေးရူးလို့သာ သုံးကြပါတဲ့။
ဒီလို ခွေးရူးပမာ နအဖဟာ အခုဆိုရင် ချောင်ပိတ် အရိုက်ခံရသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့ ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေသလို တပ်ထဲမှာလည်း တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထား အမှန်တွေကို သိမြင်လာကြလို့ ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့ လောင်နေရာက လေအတိုက်မှာ ဘားတိုက် တွေဟာ မီးဟုန်းဟုန်းလောင်ဖို့ မဝေးတော့တာကို တွေ့မြင်နေ ကြရပါပြီ။ ထိပ်ပိုင်း တွေသာ သိရတဲ့ လျှို့ဝှက် အစီရင်ခံစာ တွေ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ထိပ်တန်း လျှို့ ဝှက်ချက်တွေ မီဒီယာတွေမှာ ပြန့်နှံ့နေတာကို ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့  ဇာတ်သိမ်းဟာ မဝေးတော့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ အနေနဲ့ ပြီးခဲံ့တာတွေ သင်ခန်းစာယူဖို့ အဖက်ဖက်က ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တော့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ကို ရောက်နေ ပါပြီ။ အောင်ပွဲနီးလေ တိုက်ပွဲကြီးလေ ဆိုတဲ့ စကားလို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တဲ့ နေရာမှာ တူတာ ပေါင်းလုပ်ပြီး မတူတာခွဲလုပ်ကြဖို့ စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဆောင်းပါးအစပိုင်းမှာ တင်ပြခဲ့သလို တော်လှန်ရေးတစ်ခုထဲနဲ့ မအောင်မြင် နိုင်သလို လူထု အုံကြွမှု တစ်ခုထဲနဲ့လည်း မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ စစ်တပ်က ၀ိုင်းရံမှသာ အချိန်တိုတိုနဲ့ အောင်ပွဲ ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူထုကို လူထုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက ထိန်းကွပ်ထားသလို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စစ်တပ်ကို စစ်တပ်နဲ့ ထိန်းကွပ်ဖို့ တပ်မတော်သား အစစ်အမှန်များကို ပြည်သူ့ဘက် ရပ်တည်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရင်း ဟန်ချက်ညီအောင် တော်လှန်ရေးကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။